Akụkọ kacha ọhụrụ gbasara FCMB Group si Nigeria & ụwa | TAA
Onye ozi ọhụrụ nke mba Burundi na-edu otu ìgwè okorobịa na-eme ihe ike n'otu oge
Nwoke nọ n'ụlọ ikpe n'ihi ebubo na ọ bụ onye na-abaghị uru, aghụghọ
Senator Shehu Sani gwara onye isi ala Buhari ka ọ wepụ okwu mkparịta ụka, rịọ mgbaghara
Ọnụ ahịa nke mbak nke a gbanyere na 230.42 pasent na NSE (NSE) na Thursday bilitere, na FCMB Group na Oando na-arụ ọrụ kachasị.
Ihe ahịa ahịa ahịa nke ọnụ ọgụgụ nke 0.30 percent
Azụmahịa na Exchange Nyocha (NSE) kwụsịrị n'ehihie na Friday na mbido ahịa ahịa na-agbanyeghachi site na N44 ijeri.
Equities ndekọ oke uru na Naijiria Exchange Exchange
Ufodu ugwo nke ndi mmadu buru ibu nyere ahia onu ahia di na Naijiria (NSE) on Wednesday na onu ahia nke 2.44 percent.
Isi ego nke Naijiria na-akwado mmeri
Amụma ndị isi obodo na-egosi na Thursday bụ ndị na-arị elu, nke 0.24 na-eto eto na pasent dị n'etiti uru ndị na-acha anụnụ anụnụ.
Naijiria na-edekọ ihe ndekọ aha ahịa nke 0.02
Azụmahịa na Ndekọ Njikọ nke Naijiria kwụsịrị na akwụkwọ nlezianya na Wednesday na Index All-Share na 0.02 pasent.
Ngwaahịa nke Naijiria na-ata ah® 1.53% dobe na nkata ahịa
Ihe omume kwa izu na Ndekọ Ntaneti Naijiria (NSE) wee maliteghachi na akwụkwọ ịda mbà n'obi na Mọnde dịka akara ahịa nke 1.53 pasent.
Alakụba azụ ahịa nke Naijiria mgbe ụbọchị asatọ gasịrị na uto nke 1.11 precent
Ihe ndị dị na ahịa azụmaahịa nke Naijiria kwụghachiri na Wednesday mgbe ị daba maka ụbọchị asatọ na-esoro akara ahịa na-emewanye site 1.11 pasent.
Ulo oru ahia Naijiria furu efu naira N370 na Tuesday
The Exchange Stock Exchange (NSE) na Tuesday kwadoro ụda ụbọchị asaa na ụba ahịa nke ahịa na-ekpofu N370 ijeri otu ụbọchị.
Ahịa ahịa, mpịakọta na-agbanye na Exchange Stock Exchange
Ihe ndi Naijiria na-eme maka ubochi onwa Monday na-acha uhie uhie, na onodu ahia na-enweta 0.85 percent na olu nke mbak nke 20.25 percent kwadoro.
NSE azụmahịa maliteghachiri na ntọala ntọala nke 1.31 percent
Ihe maliteghachiri na Nyocha nke Naijiria (NSE) na Mọnde na ngosipụta dị mma na Index All-Share nke 1.31 kwalitero.
Ntughari Ntughari Ntaneti Naijiria Na-agafe akara 45,000
Ọnụahịa nke ụfọdụ na-acha anụnụ anụnụ na Exchange Ngwaahịa (NSE) na Friday jikọtara na GT Bank na-akụda oge niile elu nke N54.71 kwa òkè.
Ọnụ ọgụgụ ahịa nke ahịa ahịa nke Naijiria na-adaba na N14 ọtụtụ puku ijeri
Onu ahia nke Naijiria (NSE) na Monday meghere maka izu n'iji ihe di nma na onu ogugu ahia n'igbu ihe nickel N14 maka uzo mbu mgbe afo ato gasiri.
Ọnụ ọgụgụ nchịkwa ahịa ahịa nke Naijiria na-akpata N88 ijeri
Ihe ndị dị na Exchange Stock Exchange (NSE) na Friday kwadoro mmetụ dị mma na ụda ahịa nke ahịa nke N88 na-atụle nke ọma, na-enweta site na-acha anụnụ anụnụ.
Mkpụrụ mmanụ na ebuli ihe ngosi Ntanetị nke Nigeria site na 1.28 pasent
Ihe ngosi ntaneti nke Naijiria (NSE) nke onwa ogugu 1.28 ka Thursday mere ka odi nma site na uru nke ufodu uzo ala.
Ndepụta Ngwaahịa nke Naijiria site na 0.21%, na-emechi na omume ọjọọ
Ịzụ ahịa na Ndekọ Ntaneti Naijiria (NSE) na Wednesday dere obere uru, na Ntinye Nhọrọ niile na-atụba site 0.21 pasent.
Ọnụ ọgụgụ, Nestle kwalite ihe ntanetị ahịa Stock Exchange na Nestle site na 0.27 percent
Ulo oru n'igwe Exchange nke Naijiria, NSE, uhuruchi, na-agbaso ihe di mma dika ufodu ndi mmadu ji kwado ha.
N'ịchọ inweta ọrụ ka ukwuu na-arụ ọrụ, Office nke Head of Civil Service of the Federation (OHCSF) amalitela ịzụ ụgbọ okporo ígwè maka ndị ọrụ obodo na Nigeria.
Onye isi oche nke Burundi ahọpụtala onye ndú mbụ nke otu ntorobịa na-eme ihe ike jikọtara ya na otu onye na-achị achị dịka onye ozi ala ọzọ ya.
Otu nwoke 45, George Okoh, nọ na Friday na-ebute n'ihu Ụlọikpe Magdaịkal nke Asaba n'ihi na ebubo na ọ bụ onye uweojii.
José Mourinho na-ekwusi ike na ya na-akwanyere Ene Wenger ọbụna mgbe ha na-agba ọsọ ọsọ.
PDP: Simon Lalong abughi onye ochichi, ekwesighi ekwenye okwu nke abuo
Ndi isi ochichi nke Plateau nke PDP na-ekwu na gọọmenti Simon Lalong nwere mmasị na okwu ọzọ, na-ekwu na ochichi gọvanọ emebeghị ọganihu dị ukwuu.
Agha guber: Anyị amaghị maka ọchịchọ Senator Adeola - APC
Ndi Omeiwu Na-aga n'ihu na State Ogun kwuru na onye otu na-anọchite anya Lagos West Senatorial District na National Assembly, Senator Olamilekan Adeola, emebeghị ka ọ kpọtụrụ ya banyere ochichi gọọmentị ya na steeti.
Aga m anọgide na-anọgide na-anyụ site na World Cup ugwo mgbaghara vs Uruguay ...
Sierra Leone: Otu ọkachamara nke UN na-adọ aka ná ntị banyere enweghị nghọta na mmetọ
Ndị uweojii na-eduga na ọkụkọ na-ekpo ọkụ na-ekwu na ọ na-egbu onye ọkwọ ụgbọ ala
Pentagon: Ndị agha na-adabere na United States na Siria kụrụ ihe ọ bụla
A gaghị ahapụ ụmụ gị nwanyị, chefuo ha - Onye isi oche Buhari gwara ndị nne na nna Chibok
NCC: Ndị na-eji Intanet eme ihe na-abawanye na 100.9m na February